के ईश्वरलाई भविष्यबारे थाह छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
के कसैले भविष्य देख्न सक्छ?
हामी सबै जना भविष्यबारे सोच्छौं। हामी आफ्नो, परिवारको अनि साथीभाइको भविष्य कस्तो होला भनेर कल्पना गर्छौं। हाम्रो मनमा यस्ता प्रश्नहरू खेल्छन्‌: ‘मेरो छोराछोरीले पछि सुख पाउँछ कि पाउँदैन? के पृथ्वी ध्वस्त होला? अहिले के गरें भने मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ?’ यस्तो कौतूहलता हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने हामी मानिस स्वभावैले आफ्नो भविष्य सुरक्षित, व्यवस्थित अनि स्थिर भएको चाहन्छौं। भविष्यबारे राम्ररी थाह छ भने तपाईं पहिल्यै आफ्नो मन अनि दिमाग तयार पार्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको भविष्य कस्तो छ भनेर कसले भन्न सक्छ र? थुप्रैले भविष्य कस्तो होला भनेर पूर्वानुमान गरेका छन्‌। तीमध्ये केही पूरा भए तापनि धेरैजसो भने फेल खाएका छन्‌। तर ईश्वरको भविष्यवाणी सधैं पूरा हुन्छ। उहाँको वचन यसो भन्छ: “म आदिदेखि अन्तसम्मको, र प्राचीन समयदेखि अहिलेसम्म नभएका कुराहरू यसो भनेर घोषणा गर्छु।” (यशैया ४६:१०) उहाँका भविष्यवाणीहरू कतिसम्म पूरा भएका छन्‌?
ईश्वरको भविष्यवाणी कत्तिको सही?
विगतमा ईश्वरले गर्नुभएका भविष्यवाणीहरू कत्तिको सत्य साबित भए भनेर जान्न हामी इच्छुक हुनुपर्छ। किन? कुनै मौसमविद्ले गरेको पूर्वानुमान एउटा पनि फरक परेको छैन भने तपाईं छक्कै पर्नुहुन्छ। अनि तिनले भोलिको मौसमबारे बताउँदा तपाईं कान थापेर सुन्नुहुन्छ। त्यसरी नै ईश्वरको भविष्यवाणी एउटै पनि फरक परेको छैन भनेर थाह पाउनुभयो भने उहाँले तपाईंको भविष्यबारे के भन्नुहुन्छ, त्यो जान्न तपाईं पक्कै आतुर हुनुहुनेछ।
प्राचीन निनवेको पुनर्निर्माण गरिएको पर्खाल
एउटा विशाल सहरको सर्वनाश:
ठूलो सहर निनवे सयौं वर्षदेखि शक्तिमा रहँदै आएको थियो। यस्तो सहर एक्कासि पतन हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न सक्नु कुनै चानचुने कुरा होइन। उक्त भविष्यवाणी ईश्वरले आफ्नो एक जना सेवकमार्फत गर्नुभएको थियो। (सपन्याह २:१३-१५) के यो भविष्यवाणी पूरा भयो? भविष्यवाणी गरिएको लगभग १५ वर्षपछि निनवे सहर पतन भयो। येशू जन्मनुभन्दा ६३२ वर्षअघि बेबिलोन र मादीका मानिसहरू मिलेर निनवेलाई परास्त गरे भनेर इतिहासकारहरू बताउँछन्‌। साथै ईश्वरले निनवे सहर “उजाड र बलौटे ठाउँजस्तो सुख्खा” हुनेछ भन्नुभएको थियो। के त्यो भविष्यवाणी पूरा भयो? भयो। निनवे सहर र यसको वरपरको क्षेत्र लगभग ५१८ वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो। तर अचम्मको कुरा, त्यस सहरमा बसोबास गर्नुको साटो आक्रमणकारीहरूले त्यसलाई ध्वस्त पारे। के कुनै राजनैतिक विश्लेषकले यसरी एउटा कुरा पनि फरक नपर्नेगरि भविष्यवाणी गर्न सकेको छ र?
मानिसको हड्डी जलाइनेछ:
एक व्यक्तिद्वारा मानिसको हड्डी वेदीमा जलाइनेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो। मानिसको हड्डी जलाउने व्यक्तिको नाम, उसको घराना अनि हड्डी जलाइने सहरको नामसमेत पहिल्यै बताइएको थियो। यस्तो भविष्यवाणी गर्ने आँट कसको होला? यस्तो अनौठो भविष्यवाणी पूरा भयो भने उक्त भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति पक्कै प्रख्यात हुनेछ। परमेश्वरको एक जना सेवकले “[योशियाह] नाउँ भएको एउटा बालक दाऊदको घरानामा जन्मनेछ” भनेर घोषणा गरे। साथै बेतेल भन्ने ठाउँमा ‘त्यसले मानिसको हड्डी जलाउनेछ’ भनेर भविष्यवाणी गरे। (१ राजा १३:१, २) भविष्यवाणी गरिएझैं लगभग ३०० वर्षपछि योशियाह नाम गरेका राजाले ‘चिहानहरूबाट हड्डी निकाल्न लगाए’ अनि बेतेलमा रहेको ‘वेदीमा जलाइदिए।’ (२ राजा २३:१४-१६) कुनै विशेष शक्तिको मदतविना भविष्यमा हुने एक-एक घटनाबारे के कसैले यसरी बताउन सक्छ र?
बेबिलोन सहरको पतनबारे गरिएको भविष्यवाणी पूरा भयो
जन्मँदै नजन्मेको व्यक्तिको नाम के हुनेछ अनि त्यस व्यक्तिले एउटा विश्वशक्तिलाई कस्तो रणनीति अपनाएर पराजित गर्नेछ भनेर कुनै मानिसले गरेको भविष्यवाणी पूरा भयो भने के हामी छक्क पर्दैनौं र? कोरेस नाम गरेका व्यक्तिले एउटा राष्ट्रलाई कब्जा गर्नेछन्‌ भनेर ईश्वरले भविष्यवाणी गर्नुभयो। कोरेसले यहूदी कैदीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नेछन्‌ अनि तिनीहरूको मन्दिर बनाउने काममा सहयोग गर्नेछन्‌ भनेर पनि बताउनुभयो। साथै कोरेसले त्यस राष्ट्रमाथि चढाइ गर्दा नदीलाई सुकाउनेछन्‌ अनि त्यस राष्ट्रको मूल ढोकाहरू खुल्लै छोडिएको हुनेछ भनेर पनि ईश्वरले बताउनुभयो। (यशैया ४४:२७–४५:२) के यी एक-एक भविष्यवाणी पूरा भए त? कोरेस नाम गरेका व्यक्तिद्वारा नै यो आक्रमण भयो भनेर इतिहासकारहरू बताउँछन्‌। बेबिलोन हुँदै बग्ने नदीको पानीलाई अन्तैतिर मोड्न कोरेसले आफ्नो व्यापक सेना परिचालन गरे र नदीको पानी सुकाए। त्यति मात्र होइन मूल ढोका खुल्लै छोडिएकोले कोरेसको सेना सहरभित्र छिरे। अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने कोरेसले यहूदीहरूले मान्ने ईश्वरलाई मान्दैनथे तैपनि तिनले यहूदीहरूलाई कैदबाट मुक्त गरे र यरूशलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने आदेश दिए। (एज्रा १:१-३) यस्तो ऐतिहासिक घटनाको एक-एक विवरणको भविष्यवाणी ईश्वरबाहेक अरू कसले गर्न सक्छ र?
ईश्वरको भविष्यवाणी कत्तिको सही भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले तीनवटा उदाहरण केलायौं। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्‌। यहूदीहरूलाई राम्ररी थाह भएको तथ्यबारे तिनीहरूका नेता यहोशूले तिनीहरूलाई यसो भने: “परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूका बारेमा भन्नुभएको सबै असल कुराहरूमा एउटा कुरा पनि फरक परेको छैन। तिमीहरूका निम्ति सबै पुगेको छ, र एउटा पनि त्यसबाट फरक परेको छैन भनी तिमीहरूको आफ्नो पूरा हृदयले र पूरा प्राणले थाह पाएकै छौ।” (यहोशू २३:१, २, १४) ईश्वरको प्रतिज्ञा र भविष्यवाणी सधैं पूरा हुन्छ भनेर यहूदीहरूले राम्ररी बुझेका थिए। तर आफ्नो सबै वचन उहाँ कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको तौरतरिका र मान्छेको तौरतरिका एकदमै फरक छ। यसबारे थाह पाउनु आवश्यक छ किनभने ईश्वरले हाम्रो भविष्यबारे केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनुभएको छ।
ईश्वरको भविष्यवाणी अनि मानिसको पूर्वानुमान
मानिसले गर्ने पूर्वानुमानहरू वैज्ञानिक अनुसन्धान, उपलब्ध तथ्यहरू अनि वर्तमान घटनाक्रम अथवा अलौकिक शक्ति भएको दाबी गर्नेहरूको जानकारीमा आधारित हुन्छन्‌। कुनै विषयमा पूर्वानुमान गरिसकेपछि मानिसहरू पछि के हुने होला भनेर हात बाँधेर बस्छन्‌।—हितोपदेश २७:१.
तर ईश्वरलाई सबै कुरा थाह छ। मानिसको स्वभाव अनि चाहना उहाँलाई राम्ररी थाह छ। त्यसैले ईश्वरले चाहनुभयो भने कुनै व्यक्तिले अनि पूरै राष्ट्रले भविष्यमा कस्तो कदम चाल्नेछ, अगाडि नै थाह पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो वचन पूरा गर्न उहाँ सबै कुरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न र घटनाक्रमलाई मोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: ‘मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन मकहाँ व्यर्थै फर्कनेछैन, त्यो सफल हुनेछ।’ (यशैया ५५:११) भनौं भने भविष्यवाणी गर्नु भनेको उहाँको लागि भविष्यमा आफूले के गर्नेछु भनेर जानकारी दिनु मात्र हो। उहाँ आफ्नो वचन पूरा गरेरै छाड्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो, आफ्नो परिवार अनि साथीभाइको भविष्यबारे सही जानकारी कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? आँधीबेहरी आउँदै छ भनेर थाह पाउनुभयो भने तपाईं आफ्नो र अरूको ज्यान जोगाउन पहिल्यै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। बाइबलको भविष्यवाणीलाई पनि त्यस्तै पूर्व चेतावनीको रूपमा लिन सकिन्छ। संसारमा ठूलठूला परिवर्तन हुनेछन्‌ भनेर ईश्वरले बताउनुभएको छ। (“ भविष्यबारे ईश्वरले के बताउनुभएको छ?” भन्ने पेटी हेर्नुहोस्।) भविष्यबारे ईश्वरले बताउनुभएको कुरा मानिसहरूको भन्दा बिलकुलै फरक छ।
मानौं, मानिसजातिबारे एउटा कथा लेखिएको छ। कथाको अन्तमा के हुन्छ भनेर तपाईं पहिल्यै थाह पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी? बाइबल भविष्यवाणीद्वारा। ईश्वर यसो भन्नुहुन्छ: ‘म आदिदेखि अन्तसम्मको कुराहरू यसो भनेर घोषणा गर्छु, “मेरो उद्देश्य ठहर्नेछ, र म आफ्नो सबै इच्छा पूरा गर्नेछु।”’ (यशैया ४६:१०) भविष्यमा हुने घटनाहरूबारे ईश्वरले बताउनुभएको छ। त्यसबारे बुझ्न यहोवाका साक्षीहरूसित कुरा गर्नुहोस्। यहोवाका साक्षीहरू कुनै अलौकिक शक्ति भएका वा दुष्ट स्वर्गदूतहरूसित सम्पर्क राख्न सक्ने व्यक्तिहरू होइनन्‌ न त उनीहरूसित भविष्यवाणी गर्न सक्ने कुनै खास क्षमता नै छ। बरु उनीहरू बाइबलको राम्रा विद्यार्थीहरू हुन्‌। तपाईंको भविष्य उज्ज्वल बनाउन ईश्वरले कस्ता असल कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरू तपाईंलाई बुझाउन सक्छन्‌। तपाईं आफ्नो र परिवारको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्नुहुन्छ!
बाइबलका भविष्यवाणीहरू जाँचेर हामी ईश्वरका मनमोहक गुणहरूबारे थाह पाउन सक्छौं। उहाँले हामीलाई आफ्नो इच्छाबारे बताउनुभएको छ। यसबाट उहाँ मानिसको फिटिक्कै वास्ता नगर्ने ईश्वर हुनुहुन्न भनेर स्पष्ट हुन्छ। बरु उहाँ हाम्रो भविष्यको एकदमै चासो राख्नुहुन्छ। भन्ने हो भने उहाँ हामीले मनमा सुन्दर भविष्यको आशा राखेर जीवन बिताएको चाहनुहुन्छ।
भविष्यबारे ईश्वरले के बताउनुभएको छ?
मानिसहरू पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्छन्‌। तर ईश्वरले पृथ्वी कहिल्यै नष्ट हुनेछैन भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ।—भजन १०४:५; उपदेशक १:४.
मानिसहरू पृथ्वीको विनाश गर्न लागिपरेका छन्‌ तर ईश्वरले तिनीहरूलाई रोक्नुहुनेछ।—भजन ९२:७; प्रकाश ११:१८.
धेरैजसो धर्मले सृष्टिकर्ताको बदनाम गरेको छ र बाइबललाई वेवास्ता गरेको छ। उहाँले त्यस्ता धार्मिक सङ्गठनहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ।—प्रकाश १८:४-९.
मानिसले वा प्राकृतिक प्रकोपले होइन, ईश्वरको राज्यले खराब अनि अटेरी मानिसहरूलाई नाश गर्नेछ। “दुष्टको आखिर अवस्था सर्वनाशको हुनेछ।”—भजन ३७:१०, ३८; दानियल २:४४.
ईश्वरले आफ्नो कुरा मान्नेहरू प्रत्येकलाई बचाउनुहुनेछ। अनि सुन्दर पृथ्वीमा तिनीहरूले प्रशस्त आशिष्‌ पाउनेछन्‌। “सिद्ध मानिसलाई दृष्टि लगा, र धर्मात्मालाई हेर्, किनभने त्यस्ता मानिसको आखिरको अवस्था शान्तिमय हुन्छ।”—भजन ३७:११, ३७; प्रकाश २१:३, ४.
तपाईं ईश्वरलाई कसरी खुसी तुल्याउन सक्नुहुन्छ र दुष्टहरूलाई नाश गर्दा कसरी “उम्कन” सक्नुहुन्छ भनेर ईश्वरले मायालु ढङ्गमा बाइबलमा बताउनुभएको छ।—लूका २१:३६; यूहन्ना १७:३.